प्रेरणा पाउनुहोस् तर सूत्रहरू अनुसरण नगर्नुहोस् | Martech Zone
यस हप्ता म इन्डियानापोलिस बिजनेस बुक क्लबको तयारीको लागि टेलर क्लार्कद्वारा स्टारबक्क्ड पढिरहेको छु। टेलर क्लार्कले स्टारबक्सको शुरुवाती दिनहरूको बारेमा कुरा गर्दै पुस्तक खोल्छ र स्टारबक्सले सडकमा एक नयाँ स्टारबक्स खोल्दा यो कसरी आँखा खोलिन्थ्यो - र दुबै स्टोरहरू चेनको सबैभन्दा धेरै उपज भण्डारहरू थिए।
यसले मलाई यो पोष्ट लेख्न प्रेरित गर्यो किनभने मलाई लाग्छ कि त्यहाँ 'उत्तम अभ्यासहरू' छन् तर सफल मार्केटिंगमा कुनै सूत्रहरू छैनन्। म यसका बारे बढी लेख्नेछु कुराकानी को उमेर २, तर मँ 'कसरी सफल हुने' बयानबाट साँच्चिकै दु: खी छु जुन तपाईले वेबमा भेट्टाउनु भयो। म ब्लगरहरू र ब्लगहरूलाई समर्थन गर्न वा टुट गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गर्दछु जुन सबै कुरा सुत्रमा उमाल्दछ। कुनै सूत्र छैन।
के वेबमा छ धेरै प्रेरणा हो!
सायद मार्केटिंगको एकमात्र फार्मूला तपाईले गर्नु भएको सबैलाई भिन्नता दिन हो ... अर्को शब्दमा, सूत्रलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। मैले ग्राहकहरूको लागि सांख्यिकीय वैध प्रत्यक्ष मेल प्रोग्रामहरू बनाएको छु जुन प्रतिक्रिया दरहरूमा डबल-अंक वृद्धि हुनुपर्दछ। डाटा मान्य थियो, विभाजनको त्रुटिको कुनै सीमाना थिएन, प्रतिलिपि र रूपरेखा सबै 'सूत्रहरू' अनुसार थिए, र हामीसँग केहि सेलिब्रेटीहरू थिए जसले रिंगमा उनीहरूको प्रभाव र नाम / अनुहार मान्यता फ्याक गर्यो - तर अभियानले बम खसायो। ।
सूत्र पछ्याई, अभियानले सयौं वा हजारौं अन्य अभियानहरूबाट समान नियमहरू पछ्याउन छुट्याउन सक्ने कुनै कुरा थिएन। त्यसो भए - अभियान ती बाँकी फॉर्मूला अभियानहरूसँगै घाइते भयो, फोहोरमै।
के नगर्नुहोस्। के नगर्नुहोस्
किन विश्वमा ब्लगहरूले वेबमा त्यस्तो बल ल्याउँदछ? केही व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि यो किनभने यो विशाल सहभागिता, सामग्रीको विशाल मात्रा, र विशेषज्ञता जुन ब्लगरले सामग्रीमा ल्याउँदछ। म पक्का छु कि ती प्रभावशाली छन् ... तर ती सबै छैनन्।
एउटा ब्लगलाई कसरी आकर्षक बनाउँदछ भन्ने कुरा तिनीहरू कसरी सामान्य पत्रकारिता मापदण्डहरूको अनुरूप छैन। केही ब्लगरहरू भित्र छिर्छन् बिराला प्रतियोगिताको साथ झगडा गर्दछ। एक ब्लगमा राम्रो भोजन बारेमा पैसा ब्लग बनाउने। म कहिलेकाँही राजनीति र विश्वासको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु (र प्रायः जहरीला प्रतिक्रिया पनि हुन्छ)।
ब्लगले दुबै सामग्री र व्यक्तित्व प्रदान गर्दछ, केहि सम्बन्धित छैन जब यो कर्पोरेट ब्लगि toको बारेमा आउँदछ।
वर्षौंको प्रसिद्ध स्नैपल विज्ञापनहरू सम्झन? वेंडी काउफम्यान, स्नाप्पल लेडीको प्रयोगले स्नाप्पलको बिक्री १ 23 750 in मा २ 1995 करोड डलरबाट बढेर XNUMX XNUMX करोड पुगेको छ। वान्डीले स्नेप्पललाई उनको समयमा प्रशंसक पत्रहरूको उत्तर दिइरहेकी थिइन, र एजेन्सीले सोचे कि यो एकदम राम्रो हुनेछ। ब्रान्ड प्रमोट गर्ने तरिका। विज्ञापनहरू एक ठूलो सफलता थियो!
क्वेकरले कब्जा गर्यो, वेंडीलाई जान दिइयो, र यो सबै कपपुट भयो ... सूत्र अनुसरण गर्दै! क्वेकर अन्ततः छोडिदिए र स्नाप्पल जान दिनुहोस्। अब वेंडी एक पार्टनर हो वेंडी लगाउनुहोस् - अधिक आकार गतिविधि महिलाले लगाउँदछ, पाठ्यक्रम को एक ब्लग को माध्यम बाट प्रचारित!
मेरो कुरामा फर्कनुहोस् - वेबको प्रयोग गरी आफैंलाई प्रेरणा दिनुहोस् र नयाँ विचारहरू फेला पार्नको लागि मानिसहरू आफ्ना उत्पादनहरू मार्केट गर्न के गर्दै छन्। सूत्रहरू ... प्रयोग नगर्नुहोस्! आफ्नै सूत्र बनाउनुहोस्!
अप्रिल 9, 2008 मा 12: 38 PM
मलाई लाग्छ अन्तिम वाक्य - "आफ्नै सूत्र बनाउनुहोस्!" - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। व्यवसायिक भाषामा यसलाई सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू भनिन्छ। सामान्यतया, के काम गर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्, यसलाई चिमटाउनुहोस्, र त्यसपछि यसलाई मानक अपरेटिंग प्रक्रियाको रूपमा अपनाउनुहोस्। स्टारबक्सले के गरे
तिनीहरूले हेनरी फोर्डको व्यापक उत्पादनको पाठ लिए, र यसलाई आफ्नै छेउमा प्रयोग गरे ("तपाइँले चाहानु भएको कुनै पनि रंग पाउन सक्दछन्, जब सम्म यो पृथ्वीको स्वरहरू हुन्छ"), जसले उनीहरूलाई लागतमा खस्कियो भन्ने अर्थमा सफल बनायो, तिनीहरू सक्षम भए उपभोक्ताको अनुभव नियन्त्रण गर्नुहोस्, र केवल ती चीजहरू गर्नुहोस् जसले तिनीहरूलाई सफल बनायो धेरै अनुमान र विफल हुन सक्ने चीजहरूको प्रयास नगरी।